समाजसेवी गुप्ताले गरे क्वारेन्टाइनमा नि: शुल्क तरकारी सहयोग
/ २०७७, ५ जेष्ठ सोमबार १०:३९ प्रकाशीत
५ जेठ, बुटवल । रुपन्देही गैडहवा गाउँपलिका वडा नं. ७ निवासी गैडहवा कृषि फर्मका संचालक सन्दिप गुप्ताले गैडवा गाउँपालिकाको क्वारेन्टनइनमा आईतबार तरकारी सहयोग गरेका छन् ।
कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा “आफू पनि बचौं अरुलाई पनि बचाउँ र घर भित्र सुरक्षित बसौं ।” भन्ने उद्देश्यले आफ्नो फर्ममा उत्पादित तराकारीहरु क्वारेन्टन्इनमा सहयोग गरेको उनले बताए ।
युवा नेता तथा लुम्बिनी विकास मंञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताले व्यवसायीक रुपमा वि.स. २०७५ सालमा गैडहवा कृषि तथा पशुपालन फर्म दर्ता गरेर संचालन गर्दै आईरहेका छन् । उनले ६५ कठ्ठा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आईरहेका छन् । उनले अहिले आफ्नो बारीमा टमाटर, भिन्डी, करेला, बोडी, कांक्रो, लौका, मुला, साग, बन्दा कोपी, खुर्सानी, धनिया, गाजर, चुकुन्द, साग लगायतका तरकारीहरु रहेको बताए ।
कोविड १९ कोरोनाको सक्रमण बढ्दै गएपछि उत्पीडित समुदायका मजदुर, श्रमिक, कृषकहरु निकै समस्या बेहोर्नु परेको छ । कृषकहरुको उत्पादित तरकारी बजार नपाउँदा किसानहरु निकै चिन्तित छन् । त्यस्तै गैदहवा फर्मका संचालक गुप्ताले ग्राहकहरुको सेवाको लागी तरकारीहरु उपभोक्तको घरघरमा विक्रि गर्दै आएको भएपनि पछिल्लो समय रोक लगाएको बताए । उनले हामी जस्तो कृषकहरुको तरकारीहरु बजार पाउँनुपर्ने र यस विषयमा सम्बन्धीत स्थानिय सरकार तथा सरोकारवालाहरुले विशेष ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए । विभिन्न समाजिक संघ संस्थामा क्रियाशिल युवा नेता समेत रहेका सन्दिप गैदहवा कृषि तथा जयमा भावनी कृषक समुहका सचिव समेत रहेका छन् ।
उनले भने–“स्वदेशमा केही गर्छु भन्ने उद्देश्यले तरकारी खेती गरेको हो । तर हामी कृषकहरुको समस्याहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।” कृषकका तरकारीहरु बजार नपाउँदा कतिपय कृषकहरु बाटोमा नै तरकारीहरु नष्ट गरेको सन्दिब बताउँछन् । लुम्बिनी विकास मंञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका युवा समाजसेवी गुप्ताले सरकारले छिट्टै नै स्थानिय सकारले कृषकहरुको समस्या बुझ्नुपर्ने बताउँदै आफ्नो फार्ममा उत्पादित तरकारीहरु क्वरेन्टाईमा बस्नेलाई सहयोग गरेका छन् । उनले आईतबार निशुल्क रुपमा गैडहवा गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरे तथा गैदहवा गाउँपालिका वडा ५ का वडा अध्यक्ष कृष्ण शंकर गुप्ताको समन्वयमा तरकारी हस्तान्तरण गरेको बताए । उनले बोडी ४५ केजी, कांक्रो ४५ के.जी, करेला १५ केजी, खुर्सानी १५ केजी, टमाटर २५ केजी, बन्दाकोपी ३५ केजी, धनिया ५ केजी, मुला ५ केजी लगायत तराकारीहरु सहयोग गरेको जानकारी दिए । उनले आफुले निरन्तर समाजिक सेवामा लागिरहने र यसरी नै सहयोग गर्ने गराए । ।